I-Lakeside Luxury - I-Airbnb
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguGreg
Le ndawo yokuhlala yabucala inayo yonke into! Ukungena okwahlukileyo kunye nekhitshi labucala / igumbi lokuhlala, igumbi lokulala kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo. I-Old Hickory Lake ingaphantsi komzuzu ukusuka kule ndawo inesikhephe sikawonke-wonke sokuphehlelelwa kunye nepaki eyindawo egqibeleleyo yepiknikhi kunye nokonwabela imidlalo yasemanzini, izilwanyana zasendle kunye nendalo. IDolophu yaseNashville ingaphantsi kwemizuzu engama-25 ukuze ukwazi ukonwabela izinto ezintle ezisecaleni kwechibi ngexesha lasemini kwaye emva koko uye ezantsi edolophini kwaye wonwabele zonke izinto ezibonwayo kunye nezandi zomculo esizinikezelayo!
Le kota yomthetho w / ikhitshi elahlukileyo / igumbi lokuhlala lizaliswe yifriji yentsimbi engenasici, i-microwave, iimbiza kunye neepani, umenzi wekofu, kunye nezinye izinto onokuthi uzibone kwikhaya lakho! Yintoni eyenza ukuba oku kuhlale kukhethekileyo kubo bonke ubugcisa obukhethekileyo kunye nolunye uhlobo lokuhombisa oluvela kumagcisa ahlukeneyo. Ukongeza kumhombiso onomdla, ikhaya likumgama wokuhamba ukuya kwichibi elidala le-hickory. Kufuphi kukho irempu yesikhephe apho unokuphehlelela khona isikhephe sakho ukuze uzive ukhululekile ukuzisa isikhephe sakho semidlalo yasemanzini, ukuloba njl.njl izinto zokudlala zamanzi ezahlukeneyo ezifana nokutyibiliza, i-wakeboard kunye neetyhubhu ezinomkhosi. (Kuxhomekeke kucwangciso kunye nokufumaneka)
4.94 · Izimvo eziyi-273
Ikhaya lethu lesiko libekwe kulwahlulwa-hlulo oludume kakhulu ngaphaya kwesiqithi sase-harbor ekuphela kwesiqithi esikwichibi elidala le-hickory kunye nepaki engaphaya kwesitrato enokufikelela simahla kwesikhephe. Imizuzu emi-5 kude kukho enye ipaki enolwandle lokwenyani, ivolleyball yaselwandle, inkampu kunye neegrill. Sikumizuzu eli-10 kude neProvidence Mall kunye nabo bonke abathengisi abadumileyo, iivenkile zokutyela, iipaki kunye neendawo zokutyela ezininzi.
Siyakuthanda ukudibana neendwendwe zethu nangona kunjalo sihlala sizishiya zodwa iindwendwe ngaphandle kokuba zifuna okuthile okanye zifuna unxibelelwano phakathi kondwendwe kunye nondwendwe. Uninzi lwentsebenziswano yethu iphambi kokuba ufike ukuze uqiniseke ukuba unohambo oluhle olucwangcisiweyo. Undwendwe lwethu luhlala lufuna ukuphumla okanye ukufuna i-adventure yokujonga izinto ezibonwayo kunye nezandi zaseNashville ekufikeni kwayo! Nangona kunjalo siyathanda ukuphupha izinto ukwenza ukuhlala kwakho kukhumbuleke ke cela nje! Ngemirhumo eyongezelelweyo sivuleleke ekulungiseleleni isidlo sakusasa esicwangcisiweyo sokuqala kwiindwendwe zethu, okanye ukuba ufuna ukuchitha usuku kunye nosapho lwakho echibini lonwabela imidlalo yamanzi kwisikhephe sethu sinokuxoxa ngeendleko, ixesha kunye nokufumaneka. Ngaba unohambo lwesikhumbuzo kwaye ufuna ukucwangcisa inkumbulo ekhethekileyo nomntu wakho omthandayo masiphuphe kwaye sixoxe ngento esinokuyikhupha. Oko kukuthi: iipetals ezivukileyo ukusuka ekungeneni kwigumbi lokulala, zilungiselele ibhafu yeqamza ngaphambi kokufika kunye nechampagne okanye mhlawumbi isidlo sangokuhlwa sesibane sekhandlela sabucala kuthango lwethu eluphahleni okanye iveranda egqunyiweyo ngobunye ubusuku. Singaphupha ezinye izinto ezimnandi ngeendleko ezongezelelweyo ngokuxhomekeke kubukho bethu.
Siyakuthanda ukudibana neendwendwe zethu nangona kunjalo sihlala sizishiya zodwa iindwendwe ngaphandle kokuba zifuna okuthile okanye zifuna unxibelelwano phakathi kondwendwe kunye…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mount Juliet